Ngaba oomatshini abathengisayo bazakuba yinto eqhubekayo kwikamva? -Iindaba zemboni-Hunan Zhonggu Science and Technology Co., Ltd.
Ngaba oomatshini abathengisayo baya kuba ngumkhwa kwixesha elizayo?
Ukujonga kuphuhliso loomatshini abathengisayo, bavele njengesiphumo sokutshintsha kwesakhiwo esinamandla sabasebenzi kwintlalo yeteknoloji. Imveliso enkulu kunye nokusetyenziswa kunye notshintsho kwiipateni zokusetyenziswa kunye nendawo yokuthengisa zifuna iindlela ezintsha zokuhambisa, ngelixa iindleko zabasebenzi kwiivenkile ezinkulu zemveli, iivenkile zesebe kunye nezinye iindlela zokujikeleza ezintsha zikhula, zidibene nokusikelwa umda kwiindawo, ukuthengwa kokuthenga kunye nezinye izinto, Oomatshini abangathengisiyo abangazimanga baba yinto eyimfuneko.
Malunga nokubonelela ngoomatshini abathengisayo banokwenza ngokupheleleyo ukunqongophala kwabasebenzi kwaye bavumelane notshintsho kwimeko yokusetyenziswa kunye neepateni zokusetyenziswa. Ngexabiso eliphantsi elifunekayo kunye nokuhlala kwindawo encinci, oomatshini bokuthengisa abathengisa iiyure ezingama-24 banokonga ngakumbi abasebenzi, banomtsalane ngakumbi ekuvuseleleni umdla wokuthenga kunye nesisombululo esifanelekileyo kwiindleko zabasebenzi ezikhulayo.
Umatshini othengisa umatshini usiya kwitekhnoloji yolwazi kunye nokuqhubeka kokuhlengahlengiswa. Uphuhliso lwayo luzinikele ekongeni izixhobo zamandla ombane, okonga oomatshini bokugcina isiselo kuyeyona nto iphambili kushishino, oomatshini bokuthengisa banokugcina iziselo zipholile nokuba sele kucinyiwe ifriji, konga umbane nge-10-15% kumatshini wokuthengisa wemveli. Oomatshini abathengisayo baya konga umbane ngakumbi kwaye basebenzise imisebenzi emininzi njengoko singene kwi-21st ngenkulungwane.
Ukuzenzekelayo yinto engathintelekiyo, thina'Ndiza kubona izixhobo ezikrelekrele ngakumbi ezithatha indawo yezemveli, nokuba kukwimveliso, kulungiswa okanye kuthengiswa kwakhona, ithemba lokuthengisa umzi mveliso liqaqambile phantsi kwezi meko.